Guuldarradii shirkii Garoowe oo sii kala geeysay madaxda Galmudug - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Guuldarradii shirkii Garoowe oo sii kala geeysay madaxda Galmudug
Arimaha Bulshada Wararka Galmudug Wararka Maanta
May 12, 2019 admin987
Maalin uun ka dib markii madaxweyne Axmad Ducaale Geelle (Xaaf) uu shaaciyay in “fashil” uu ku soo dhamaaday shirkii madaxda Soomaaliya uga socday Garoowe, ayaa waxaa hadda soo baxaya in madaxweyne Xaaf iyo ku xigeenkiisa ay ku kala aragti duwan yihiin arrintii sababtay in miiska wadahadalka ee Garoowe lagu kala tago.
Sida uu sheegay Xaaf arrinta la isku mari wayay ee uu “masiibada” ku tilmaamay ayaa waxa ay ahayd arrinta Galmudug oo muddo dheer khilaaf ka jiray, gaar ahaanna maamulkaasi iyo dowladda federaalka oo arrimo dhawr ah ku kala aragti duwan.
“Arrinta aadka u dhibka badan oo runtii aad iyo aad, marka aad fiiriso u culus oo dhinac kastaa taabaneysa waa tan Galmudug,” ayuu yiri madaxweyne Xaaf.
“Markii la isku yimid, laba sano ayaa ka hartay tii hore, laba sano oo kale ayaan ku darnay, si ay dadkaan iyo ninkaan (Sheekh Shaakir) ay ma aragtay mas’uuliyaddooda ay gaar siiyaan….iyo baarlamaanka in la keeno iyo wasiirradii, si ay u wada shaqeeyaan, marka waxaanu siinay laba sano oo aan ugu darnay labadii sano ee hartay.”
“Dastuurrada Soomaalida oo dhan waxaa ku yaalla qofka xildhibaanka ah marka la dhaariyo wakhtigiisu waa afar sano, madaxweynaha marka la dhaariyo wakhtigiisu waa afar sano. Wax haba yaraatee ka dambeeya ma jirto,” ayuu yiri.
“Annagu waxaan dhaqangelinay in marka labadii baarlamaan la isku daray, dastuurkii la ansixiyay, markii la ansixiyayna wakhtigii wuxuu dhammaanayaa 2021-ka. Sidii ayaan ku joognay, dowladda Federaalka iyada ayaa soo dhaweysay. Madaxweynaha ayaa Villa Soomaaliya ku ansixiyay oo waa lagu saxiixay. Dhuusamareeb baa la tagay, isku darkii madaxweynaha ayaa ka qeybgalay. Wixii saas ahaa oo dhan dowladda Federaalka waxay yirahdeen wax ka jira lama arka. Tii hore oo Cabdikiriin uu madaxda ka ahaa 2015-kii, taa uunbaa jirta. Dhibaatada halkaa ayay ka timid.”
“Heshiiskii aan heshiinnay annaga iyo Ahlu Sunna micnaheedu ma ahayn in si qaldan loo fuliyo. Markii aan heshiinnay oo lagu soo saxiixay Jabuuti oo madaxweynaha uu markhaatida ka noqday oo madaxtooyada lagu saxiixay ka bacdi, annaga madaxda ah waxaan isku khilaafnay habkii heshiiska loo fulin lahaa, heshiiskii oo dhanna wax ka fulay ma jirin,” ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo ka jawaabayay hadalka madaxweyne Xaaf.
“Ilaa haddana, 14-kii qodob oo aan ku soo heshiinnay wax ka hirgalay haba yaraatee ma jirin. Baarlamaan la isku daray ayaan jirin oo aan heshiis ku ahayn, waxaan jirin dastuur la isku daray oo aan heshiis ku ahayn, waxaan jirin ciidamo la isku daray oo aan heshiis ku ahayn, haddana ma jirin wakhti ku qoran 14-kii qodob ee heshiiskii aan ku soo heshiinnay Jabuuti.”
Heshiiska Galmudug iyo Ahlu Sunna ayaa yimid ka dib khilaaf muddo dheer soo jiitamayay, kaa oo ka soo billowday dhismaha Galmudug.
“Sida sharciga ah marka laga hadlaayo, dowladda waxay leedahay muddo. Muddadaasina waxa waaye midda uu dastuurka sheegayo oo afar sano ah. Madaxweynaha markii uu tartanka galaayay, wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Federaalka, waxay soo saartay warqad ay ku caddeynayso in qofka ku guuleysta in muddada xilka ka dhiban uu qaadan doono xilka,” ayuu yiri Carabey.
“Dastuurka Galmudug waxaa ku qoran, in wixii ka qaldama ama aan laga helin, dastuurka Federaalka Soomaaliya loo celinaayo. Dastuurka Federaalkana waa ay ku caddahay in wakhtiga qofka uu ku egyahay muddo xileedka uu dhameystiraayo….Dastuurka Galmudug wuxuu qorayaa in wakhtigu afar sano yahay ka billaabato 2015, kuna egyahay 2019-ka.”
Madaxda Galmudug ayaa hadda ku kala maqan khilaaf soo billowday sanadkii hore, kaa oo sababay in xildhibaano ka tirsan baarlamanka Galmudug oo ku shiray magaalada Cadaado ay sheegaan in ay xilkii ka qaadeen madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Xaaf ayaa shalay shaacisay in shirkii Garoowe lagu heshiin waayay oo uu fashil ku soo dhammaaday, waxaana uu eedda inteeda badan saaray dowladda federaalka.
“Annaga laftayadu waxaa khilaafka iyo wixii jiraba in la dhammeeyo ayaanu diyaar u ahayn, laakiin nasiib darro, madaxweynaha iyo ra’iisalwasaaruhu, diyaar uma ahayn in ay cid la heshiiyaan ama la heshiiyo ama Soomaali wax noqoto,” ayuu yiri Xaaf.
“Waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah sharcigii doorashooyinka oo horey aan uga hadalnay Baydhabo, sharcigaasi marka laga hadlay, waxaa la ogolaaday oo kaliya in qof iyo cod doorasha ah laga qabto Soomaaliya. Laakiin sida doorashada loo sameynayo ama wakhtiga midna lagama hadlin. Arrintaasi waxay ahayd arrin madlan oo ahayd inta shir la isugu yimaado in laga wada hadlo. Arrintii iyadoo dowlad goboleedyadii cidna arag wixii ay rabaan, ayay geeyeen baarlamaanka,” ayuu sii raaciyay madaxweyne Xaaf.
Inkastoo war rasmi ah aanan wali laga soo saarin shirkaasi, haddana waxaa Garoowe isaga tagay inta badan Madaxda, taa oo ka dhigan in khilaafka madaxda Soomaaliya uu u muuqdo mid aad uga qoto dheer sida la moodaya.
Xukun lagu riday raggii kufsaday Caasho Ilyaas
Isbaheysi cusub oo ay sameysteen Puntland, Hirshabelle & Koofur Galbeed
Daawo: Madaxweynaha Galmudug oo la kulmay Dhalinyarada
Faafaahin Qarax ka dhacay Kismaayo
4 Xisbi oo war murtiyeed ka soo saaray xaalada siyaasadeed ee dalka